May 2017 - Ceelhuur Online
Madaxweyne Farmaajo oo u Magacaabay Fahad Yaasiin Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada JFS
May 31, 2017 admin162
Madaxweyne Farmaajo oo u Magacaabay Fahad Yaasiin Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada JFS FAAFIN DEGDEG AH 31ka May 2017 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta u magacaabay Fahad Yaasiin inuu noqdo Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. “Waxaan xilka Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u magacaabay Mudane Fahad Yaasiin […]
May 31, 2017 admin139
Ciidamada Ammaanka Magaalada Boosaaso ayaa Gacanta ku dhigay Gaari UD ah oo waday Walxaha Qarxa, Isgaarsiin Casri ah nooca ay Ciidamadu isticmaalaan iyo Labadii Qof ee gaariga wadatay. Gaariga wuxuu Siday Qudaar, Ciidamada oo ku baarayay Kontaroolka Laga soo Galo Magaalada Boosaaso ayaa Ogaaday in Qaraxyo saaranyihiin Gaariga kadibna waxaa la amray in rarka saaran […]
May 31, 2017 admin179
The Board of Executive Directors of the World Bank today approved a US$50 million emergency project – Somalia Emergency Drought Response and Recovery Project (SEDRP, the Project) – to scale up the drought response and recovery effort in Somalia. Somalia is facing its worst drought in decades, with over half the population – an estimated […]
May 30, 2017 May 30, 2017 admin170
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf oo ay wehliyaan Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Gaas, Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo masuuliyiin kale ayaa maanta socdaal lug ah ku maray gudaha magaalada Cadaado xarunta Galmudug. Madaxda ayaa bulshada kula hadlay bartamaha magaalada, waxayna ku hanbalyeeyeen bulshada iyo maamulka sidii ay nabadda iyo horumarka isugu howleen. Sidoo kale Madaxda […]
Sawirro: Caleemasaarka Madaxweynaha cusub Galmudug
May 29, 2017 admin166
Munaasabadda caleemasaarka Madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa goor dhow soo idlaatay, waxaana ka soo qeyb galay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe, Hogaamiyaha Puntland Cabdi Wali Gaas, Hogaamiyaha Koofur Galbeed Shariif Xasan, Hogaamiye xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe, Wasiirka Arimaha Gudaha DFS Cabdi Juxa, Wasiirka arimaha Dibada […]
Sawirro: Diyaargarowga Caleemasaarka Madaxweynaha Galmudug
May 29, 2017 admin182
Waxaa heer gabagabo ah maraya diyaargarowga xaflada caleemasaarka Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf. Magaalada Cadaado ayaa laga dareemayaa diyaargarowga, marti badan ayaa u timid sidii ay uga qey gali lahayeen caleemasaarka, Madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madax maamul goboleedyada ayaa la filayaa in saacadaha soo socda soo gaaraan Cadaado. Ammaan ayaa […]
Barlamaanka Galmudug oo kordhiyey waqtiga magacaabista Golaha Wasiirada (Sawirro)
May 29, 2017 admin137
Barlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo kulan aan caadi aheyn ku sheegay magaalada Cadaado xarunta Galmudug ayaa waxaa hor yimid Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf. Madaxweynaha ayaa Barlamaanka ka codsaday in 75 cisho loogu kordhiyo magacaabista golaha wasiirada, oo horey ugu ekeyd 3 Juun. Barlamaanka ayaa gacantaag ku ansixiyey codsigii madaxweynaha, waxaana uu haystaa ilaa […]
May 28, 2017 May 28, 2017 admin170
Garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado ayaa waxaa kasoo dagay wafdi balaaran oo uu hogaaminayo wasiirka arimaha gudaha iyo federaalka Cabdi Faarax Siciid Juxa, madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi ayaa wafdigaan garoonka ku soo dhaweeyey. Wafdigaan ayaa ka qeyb galaya caleemasaarka Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo beri ka dhaceysa magaalada Cadaado, sidoo kale Fanaanada […]
Sawirro: RW Kheyre oo dhagax dhigay Wadada Sodonka Magaalada Muqdisho
May 28, 2017 May 28, 2017 admin238
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya mudae Xasan Cali Kheyre ayaa maanta dhagax dhigay Jidka 30-ka oo lagu sameynaayo dib u dayactir, waxaana uu shacabka ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan. Ra’iisul Wasaaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in dhismaha Wadooyinka Magaalada Muqdisho ay ka qeyb qaadanayso bilicda iyo sidoo kale xasilinta Caasimadda. Waxaa uu bulshadda Soomaaliyeed ka dalbaday […]
Cabudwaaq: 4 Qof oo ku dhintay rasaas lagu furay goob raashin lagu qeybinayey
May 28, 2017 admin142
Afar qof ayaa ku dhintay 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen ka dib markii nin hubeysan uu rasaas ku furay goob raashin laga qeybinaayay degmada Caabudwaaq. Ninka Rasaasta furay ayaa la sheegay inuu doonayey inuu dhaco raashinka, Saxafi ku sugan degmada Cabudwaaqo oo aan la xariirnay ayaa inoo xaqiijiyey dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa u […]